Ngaba iMithetho eNtsha yeVAT iya kuyichaphazela njani iShishini lakho lokuDodobala ngo-2021？
I-E-commerce iqhuma kwinqanaba lokubonisa. Abantu kunokwenzeka kakhulu ukuba bathenge izinto ngokwamanani kunokuba babenjalo ngaphambili, oko kuthetha ukuba iinkampani ezininzi ziya kuthengisa iimveliso zazo kwi-intanethi. Ingxaki yecorona yayiqhuba ngamandla kwimveliso. Nangona kunjalo, imigaqo ethile, imithetho, imimiselo yolawulo ...
Uyifumana njani iArhente yokuLawulwa kweMilenze ngo-2021?
Ukufumana iarhente yokulahla esemthethweni nethembekileyo kuye kwaba "yintlungu" kuninzi lweziqalo kwishishini lokulahla. Kuba i-E-Commerce inegalelo ekubeni yenye yezona mveliso zinkulu kwaye zinobuchule kwihlabathi. Ngenxa yeli xesha, abathengisi bezentengiso bazilungiselele ...
Kutheni uxabisa iiarhente zokulahla ishishini kwishishini lakho lokulahla kule 2021?
Iiarhente zokulahla ziye zatshintsha umdlalo kwishishini lokuwisa phakathi kwabanini beentengiso. Baye banceda kakhulu abanini bamashishini ukuba bathengise ukukhula kwabo kwishishini. Kodwa ngaphambi kokuntywila kwezi Arhente zoDropshipping, ndiyazi ngokuqinisekileyo ukuba abanye kuni basenokungabi nayo b ...